Otu esi edozi ihuenyo pc m buru oke ibu? - LifeBytes | LifeBytes
Netwọk dị na netwọkụ | | Netwọk
Otu esi edozi ihuenyo pc m buru oke ibu? Nke a bụ ajụjụ a na-achọsi ike. Ma ihu ọma ọ bụ nsogbu nke ihuenyo mkpebi, mgbe akara ngosi na windo n'ime pc pụta buru ibu ma karịa ogo nke monitor ọ ga -ekwe omume ibelata ha ma debe ha n'ụdị nha ha.
Idozi nsogbu a dị nfe, naanị gbanwee ihuenyo mkpebi, anyị nwere ike ikwu ya dị ka nke a: uru mkpebi ihuenyo dị oke nha nke onyonyo ndị dị na monitor, ya bụ, na okwu ndị ọzọ, ụkpụrụ dị elu na mkpebi nke ihuenyo ihe onyonyo pere mpe ga -adị. Otu esi agbanwe ha ga -adabere na Usoro njikwa na -eji.
1 Nzọụkwụ ị ga -eso iji hazie mkpebi ihuenyo na Windows 7
1.1 Ị nwekwara ike ịgbanwe nha akara ngosi desktọọpụ
2 Usoro na Mac
Nzọụkwụ ị ga -eso iji hazie mkpebi ihuenyo na Windows 7
Pịa bọtịnụ aka nri na mpaghara kpuchie nke desktọpụ pc. Họrọ "Njirimara".
Gaa na mbipụta "Ntọala", pịa na nkwupụta "Ngosipụta Njirimara".
Mịgharịa njikwa na nkwupụta "mkpebi ihuenyo" n'aka nri. Dị ka anyị kwuru, mkpebi ahụ dị elu, ntakịrị akara ngosi.
Pịa «aplicar»Mgbe ị na -ahọpụta ntọala mkpebi ọhụrụ.
Ị nwere nhọrọ ịlele ihuenyo. Ị nwere ike gosi nkwenye gị site na ịpị "Ee" n'ime obere igbe kwuru "Nyochaa ntọlite”Wee pịa "Inabata". Enwere ike ime arụmọrụ a ugboro ole ịchọrọ.
Ị nwekwara ike ịgbanwe nha akara ngosi desktọọpụ
Ị ga -abanye na desktọpụ nke kọmputa gị.
Pịa aka nri na desktọpụ ahụ
Ịhọrọ "Lelee" wee họrọ nha akara ngosi nke mmasị gị
Usoro na Mac
N'ihe banyere kọmputa Mac mkpebi ihuenyo na -ahazi ọnụọgụ ozi enwere ike igosipụta n'otu oge na ileba anya. Otu ụkpụrụ na -arụ ọrụ dị ka ọ dị pc kedu ihe ha ji Windows ka mkpebi ahụ dị elu, obere ihe ga -apụta na ihuenyo a ga -emepụta mmetụta na -abụghị ya mgbe ị na -etinye mbelata ọnụ ahịa ekwuru.
N'ezie, ọ ga -adabere na onye na -eji kọmputaỌ bụ ihe masịrị gị, onye nwere nkwarụ anya ga -ahọrọ ịrụ ọrụ na nnukwu ihe maka ebumnuche nke ụdị adịghị ahụ anya wee si otú a nwee ike were anya nke ọma hụ ha. Ndị Serie Mac oS nwere njikwa nke mkpebi wuru n'ime ya ka enwere ike idozi mkpebi ihuenyo ngwa ngwa.
Usoro maka kọmputa Mac dị ka ndị a, usoro site na nkwụsị:
Họrọ akara Apple nke dị n'elu akaekpe ihuenyo ahụ.
Pịa na nkwupụta "Mmasị sistemụ", wee họrọ "Ihuenyo".
Pịa na nkwupụta "Ihuenyo" ọ bụrụ na ahọpụtabeghị ya.
Họrọ otu mkpebi nke dị na ndepụta nke mkpebi site na ndepụta nke mkpebi ngwaọrụ. Anyị maara na mkpebi ihuenyo a na -ejikarị emekarị bụ 1280 x 1024 maka ngosipụta ọkọlọtọ na 1280 x 800 a gwara ya nyocha ụdị panoramic. Na kọmputa Mac OS X nhazi ọhụrụ na -arụ ọrụ ozugbo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndụ LifeBytes » Netwọk » Kedu otu esi edozi ihuenyo pc m buru oke ibu?
Otu esi edozi ekwentị mmiri mmiri
Hụ ihe niile gbasara Freedompop na Mexico